iHelp 2 -I-GPS yokuKhangela isitshixo, ukungangeni manzi, ukungashukumi kunye nokuwa (ukuGuga ngeDementia) -Izisombululo ze-OMG
Kutheni Us? Ukufikelela simahla kwiNkqubo yokuKhangela - i-Android, i-IOS kunye nePort-base Portal (yasimahla Ubhaliso lobomi boMsebenzisi weKhaya-Akukho Ntlawulo yenyanga / yoNyaka).
IHelp 2.0 isixhobo sabantu abadala be-GPS Tracker unokubeka iliso ngexesha elifanelekileyo kwimeko yabadala, xa kukho ukuwa, iHelp unokuzenzekela ngokuzenzekelayo i-SMS kwaye ubize kumalungu osapho lwe-5, ukuze uncedo lunokunikwa ngokukhawuleza.
The IHelp 2.0 isixhobo sabantu abadala be-GPS Tracker Unceda iintsapho kunye neentlungu eziphezulu kwiingxaki ezinxulumene nememori. Ukuba unomzali okanye ilungu lentsapho elibonisa umzekelo ohambelanayo wokuziphatha okulibala, okanye unokuba nzima ukuhlala ubomi obuzimeleyo, IHelp 2.0 isixhobo sabantu abadala be-GPS Tracker Uya kwenza ubomi bakho bube lula kwaye buncinci. iHelp 2.0 Kubaluleke gqitha kuba kuya kukuphawula okanye kubhale ukuba umntu ophezulu nguye:
* Ukuphuma okanye ukulahleka kwindawo eqhelekileyo okanye engaqhelekanga.
* Ekhuselekileyo ngaphakathi okanye ekhayeni labo.
* Iinkqubo zokulandelela i-GPS zinokubonelela ngokuqinisekileyo, ukhuseleko kunye nokukhuseleka okunokwenza indlela enzima yokulahleka kwememori ibe lula kwaye ingakhathazeki kakhulu kubo bonke abathintekayo.
Ukuba umntu osekhulile uziva engavumelekanga, unako ukucofa iqhosha leFowuni imizuzwana emithathu ukwenza ucingo kwifowuni ehambelana nayo. IHelp 2.0 isixhobo sabantu abadala be-GPS Tracker ithumela i-SMS nge-GSM inethiwekhi engenazintambo. iHelp 2.0 encinci, intle kwaye iphathekayo. Ingumlingane osondeleyo kumdala.
iHelp 2.0 - Isixhobo sabantu abadala seGPS
Umbala we-4-Kukulungele ukubeka-kuLula kunye nokuSebenza
IiWebhu kunye neeNkqubo zeMfono yokuJonga (Indlela yeembali / ixesha lokwenyani)
Iwebhu kunye neQonga lokulandela umkhondo we-APP ziya kubonelelwa. Ungajonga ukuba iphi indawo ekuyo isixhobo sakho (indlela yezembali / ixesha lokwenyani) ngokusebenzisa iPC yakho, iThebhulethi okanye iSmartphone.
Yobungakanani: 60mm * 45mm * 18mm
Ubuninzi be-2G: 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
Ubuninzi be-3G: I-UMTS / HSPA (850/900/1900 / 2100Mhz)
I-Chip Chip: U-Blox 7 (INKxaso ye-AGPS)
Rhoqo kwe-WIFI: I-802.11 b / g / n, 2.4G
Umbonisi: Ishukumisi kunye neSenzi soVibration
Connectors: I-4 Pin-Magnet yokutshaja
Imakrofoni kunye noSomlomo: Yakhelwe ngaphakathi
Antenna: Yakhelwe ngaphakathi i-ceramic kunye ne-antenna ye-FPC
Idilesi yeSIM Card: Ikhadi le-Nano Sim
Ukuhlawula iVotsi: 5V DC
Ukuma okwangoku: ≤2mAh
Ukushisa: Umbandela wokuSebenza: - 20 ° C ukuya + 65 ° C; Umbandela woGcino: - 30 ° C ukuya + 60 ° C
Ubuntu bezizalwane: I-5% -95% (engavumi)
Isiqalo eshushu: I-Approx 1s
Ukuqala kobushushu: I-Approx 2s
Ukuqala kobandayo: I-Approx 25s
Into evikela amanzi: IP66
iHelp 2.0 -I-Dementia yabantu abadala ye-GPS Keychain-isiQinisekiso
25687 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-4 Namhlanje